DAAWO: Madaxwayne Axmed Madoobe oo hadal ka nixiyay reer Kismaayo ku dhawaaqay..(Ogow waa maxay). - www.xogtashacabka24.com | www.xogtashacabka24.com DAAWO: Madaxwayne Axmed Madoobe oo hadal ka nixiyay reer Kismaayo ku dhawaaqay..(Ogow waa maxay). - www.xogtashacabka24.com
DAAWO: Madaxwayne Axmed Madoobe oo hadal ka nixiyay reer Kismaayo ku dhawaaqay..(Ogow waa maxay).
Madaxwaynaha maamul goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa wuxuu amar ku bixiyay in ay dhamaan dadka dagan guryihii ay lahayd dowladii dhexe ee Soomaaliya ay iskaga baxaan.
Wuxuu madaxwaynuhu intaasi raaciyay in la gaadhay wakhtigii dhulkaasi dowlada dib loogu soo celini lahaa gacanta dowlada isla markaasna ay munaasab tahay wakhtigan in laga guuro dhulka dowlada.
Madaxwaynaha ayaa qeexay sababta isagoo sheegay in mudo dheer ay dadkaasi daganaayeen dhulkaasi hadii ay dhisteena wali ay ka bixi doonaan inay dhisteena aysan sabab rasmi ah u noqon doonin in ay gacanta shacabka ku sii jiraan dhulalkaasi ay leedahay dowladu.
Ugu danbayntii madaxwayne Axmed ayaa sheegay in aan wax gor-gortan ah laga galaynin soo celinta dhulka dowlada.